Ogaden News Agency (ONA) – War dagdag ah- Mudaaharad ka dhacay London oo u adegayaasha wayaanaha lagala wareegay meeshii shirka ay ku qabsadeen
War dagdag ah- Mudaaharad ka dhacay London oo u adegayaasha wayaanaha lagala wareegay meeshii shirka ay ku qabsadeen
Waxaa maanta ka dhacay London Mudaaraad taariikhda galay. Waxaa uu bilowday 1:00 duhurkii saacadda London. Ayadoo ay jaaliyadaka Somalida Ogadenia oo ka kala yimid Dalka UK(ingiriiska dacaladiisa). Waxaa ka soo qayb galay in ka badan shan jaaliyadood. Waxaa kaloo soo xoojiyay Jaaliyadda Somalida ee UK. Waxaa markii dambe Kusoo biiray Jaaliyadda Amxaarada iyo dhallinyaro ka socotay Jaaliyaddaha Oromada iyo Sidaamada.
Mudaaharaadku wuxuu ka bilowday Jaamacadda loo Yaqaano Imperial College oo Caasumadda London Bartamaheeda ku taala. Waxaa hal mar sawaxanku is qabsaday daaraddii Jaamacadda. Xaarwayaane – Xaar wayaane iyo Meles Ha dhaco – oo lagu jiibinayay afaf kala duwan ayay banaanbaxayaashu ku dhawaaqayeen. Waxay booliskii ku haggoogteen qaar si aad xishoodarro uga muuqato u xaluulanayay hoolkii ay shiirka ku qabanayeen doofaaradii dadkooda iyo dalkooda ka dooraty gumaysi luflufkiisa.
In yar ka dib halgamayaashii mudaaharaadayay waxay go’aansadeen inay adeegayaasha gumaystaha hoolka shirka ugu galaan. Waxay jabsadeen xayndaabkii booliska, waxayna isku shubeen Hoolkii shirka. Waxaa si hal haleel ah loola cararay saalo wayane oo lagu qariyay kushiinkii Jaamacadda, markaas ayaa doofaaradii u soo shiranaya ay orod kaga baxeen shirkii, ayagoo u cararay xaggii safaaradda Itoobiya oo iyadu wax yar u jirtay. Booliskii ayaa ka daba geeyay wafdi ku sheegii.
Halyeeyadii dhaliyarada ayaa daba dhigay oo ku eryaday dabaqoodhigii waddaddi safaaradda, ilaa albaabkii safaaradda la isku qabsaday. Waxaa soo gurmaday booliskii oo halkaas ku joojiyay halgamayaashii.
In yar ka dib waxaa ka daba tagay dadkii mudaaharaadyay oo safaaraddii dhinac walba ka xidhay. Waxaa aagaas la keenay boolis tiradii ugu badnayd intii Jaaliyadehenu mudaaharaadayeen. Waxay noqotay in dadkii gadooday lagu maslaxo, inay aagooda xajistaan oo aan dib loo celin hase yeeshee, bolisku u galbiyo wayaane doofaaradii dacalada ka soo dhuutaalaynayay.
Wuxuu safiirkii iyo shaqalihiisii ku baryootameen ha la dhaafiyo wadaada oo swaxanka socda shir kuma qabsan karno, hase yeeshee booliskii uma garaabin. Taas waxay keentay in shirkii uu fashil labaad ku yimaado oo gudaha ay ku oodnaadaan ilaa 7:00 badii fiidnimo.
Waxay soo dareereer ayadoo wejigooda fool xumada , madowga iyo najaasada ka muuqata aan qoraal lagu cabiri karin.
Waxaa laga soo sheegay in shirku ku socday Af amxaari qudha oo aanan la tarjumin halkaasoo doofaradii Somalida u badnaa aanay hal erayna ka garan waxaa ergada Wayaanuhu ku dhurayeen.
Ayadoo loo bahan yahay in maqaalo badan laga qoro mudaaradkan waxaa manta soo baxay awoodda shacabku ay leeyihiin , ayadoo laba gooboodba laga qixiayay wayaane iyo saalo wayaano oo lagu kalifay inay magan u ahaadaan Boolsika ingiriiska. Waxaa xusid mudan in mudaaharka sidan u dhacay boqolkii 30 ay ahaayeen caruur dadoodu u dhaxayso 5 jir ilaa 12 jir. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in dareenku isku meel ka taagnaa shuucuubta Itoobiyo iyo Somalida Ogadenia oo goostay in Meles iyo xaar- walwaaladiisa la isdhaafiyo. Waxaa kalo iyadana xusid mudnaa in dhammaan si xun u socodkii dadkeena ku dhex dhuuman jiray ay muraayaddu si cad maanta u qabatay, taariikhda iyo Shacabka Somalida Ogadeniyana aanay cafin doonin.